Iphrinta Yasesodongeni, Iphrinta Yaphansi, Iphrinta Ye-Inkjet Ephathwayo - huakehengrun
Ucingo:+86 189 7131 9622
Iphrinta ye-Inkjet ye-Single Pass
iphrinta ye-inkjet yedeskithophu
Iphrinta ye-cij inkjet
I-HKHR Wall Printer UV Wall Painting Machine
Iphrinta ye-inkjet yodonga olunesivinini esiphezulu
Iphrinta ye-inkjet ye-CMYK yokuphrinta kwe-wall mural mac...
Iphrinta yobuciko bodonga lwangaphandle Iphrinta ye-Robot Wall Pri...
Umshini Wokuphrinta we-inkjet we-3D UV Mural oqonde ngqo...
I-automatic Mural 3D Vertical wall printer machine...
Umshini Wokuphrinta Wall Wall Omile Oyi-3D Wall Pen
I-High Speed ​​CMYK Mask Logo Umbala wephrinta ye-inkjet ye-UV
Umshini Wokufaka Ikhodi Wokuphrinta we-Inkjet ophethwe ngesandla
Iphrinta ephathekayo yedethi yekhodi ye-inkjet ephathwayo
I-TIJ Coding pen Portable Mini Inkjet Printer Mac...
75mm Ikhodi yedethi yephrinta ye-inkjet ephathwa ngesandla eshisayo ...
Umshini Wokuphrinta we-3D we-UV we-UV osheshayo
Umshini Wokuphrinta we-Ink Jet UV Floor Wokulungiswa Okuphezulu...
I-Wuhan HAE Technology Co., Ltd. kusukela ngonyaka wezi-2008, abangabaholi bomhlaba ku-Inkjet Printing, ukuphrinta odongeni nokuphrinta phansi.Lolu udonga lokuqala emhlabeni kanye nephrinta yasodongeni emisha kakhulu engasetshenziselwa ukuphrinta cishe noma yini kunoma iyiphi indawo eyisicaba ngekhwalithi ephezulu kangangokuthi amehlo akho angeke akholwe.
Iphrinta yodonga yohlobo lwe-huakehengrun Wheel ilula futhi iyagoqeka ukuze i-tranporatioin, isebenze kalula, izinzile kanye nokuphrinta kokucaca okuphezulu okungu-2880dpi.
Kukhona iphrinta yodonga lukayinki olusekelwe emanzini e-CMYK kanye nomshini wokunyathelisa odongeni lukayinki we-CMYK+W UV ongakhethwa ukuze uhlangabezane nesicelo sesicelo sokuphrinta sekhasimende esihlukile.
yiba ngumsizi wethu
Uyinki we-UV omncane kakhulu emhlabeni ome mpo...
Sinesipiliyoni esicebile sokuklama, ukucutshungulwa kahle kwemishini kanye namandla okukhiqiza.
Ngokusebenzisa uhlelo lwamanje lokulawula oluhlakaniphile olusezingeni eliphezulu lwasekhaya, oluhlanganiswe nemishini esezingeni eliphezulu yokwenza izingxenye, ukwenza ukuhanjiswa kwemishini kunembe kakhudlwana, ukunyakaza okuzinzile, nempilo ende yesevisi.
Manje, izikole, amahhotela, izinxanxathela zezitolo, amahhotela, izinkulisa, izindawo zokucwala izinwele, izindawo zokuzivocavoca, nezindonga zangaphandle zezinye izakhiwo konke kudinga ukupendwa odongeni ukuze kuhlobise.
Ukucabanga ngalokho amakhasimende akucabangayo nakufunayo, yonke into ngokombono wekhasimende, kusukela ocwaningweni kuya ekwenzeni, ukuhlangabezana nokuziphatha komuntu ngamunye, ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, nokunciphisa izindleko zokukhiqiza.
Ithimba lenkampani elifunde kakhulu le-R&D liqinisekisa ukuqamba okusha okuqhubekayo nokusebenza okuzinzile kwemikhiqizo yenkampani, okwenza imikhiqizo yenkampani igqame emqhudelwaneni wemakethe.
Inkampani igcizelela ukuthi igxile kumakhasimende futhi igxile emakethe, ukuze inkampani ikwazi ukugcina ukukhula okusebenzayo kwesikhathi eside.
Ukuhlukaniswa kwezimiso zamaphrinta e-inkjet
1. Iphrinta ye-inkjet eqhubekayo Ngaphansi kwengcindezi yephampu kayinki yokuphakela, uyinki udlula epayipini likayinki ukusuka ethangini likayinki, ulungise umfutho, i-viscosity, bese ungena kusibhamu sesifutho.Njengoba...
Ukugcinwa nokugcinwa kwekhanda lokuphrinta kwe-inkjet
Njengengxenye eyinhloko yephrinta ye-inkjet, ikhanda lokuphrinta libaluleke kakhulu.Ikhanda lokuphrinta liyigugu kakhulu, futhi kuzoba buhlungu kakhulu ukusebenzisa isikhathi eside.Ukuze t...
Ikheli Lefektri Yenkampani YaseBeijing: 101A, Building 11, Courtyard 3, Gaolizhang Road, Haidian District, Beijing
Overseas Sales Office and Middle China Sales Office:
Inkampani engu-Wuhan HAE Technology Co., Ltd.
Isitezi esi-6, isakhiwo esingu-2A, i-Optics Valley Science and Technology Port, i-Guanshan Road, i-Optics Valley, i-Wuhan, e-China
ucingo olungashintshi:+86 27 8750 8600
Iphrinta ye-inkjet ephathwa ngesandla
Iphrinta ye-Inkjet eku-inthanethi